Kedu calorie ole dị n'ime akpa nke ibe bekee? - Magazin ADL ➡
Ego ole kalori dị na akpa nke achịcha anụ?
Ihe 164 hụrụ
Chiply 7Quinoa Chips - Barbeque 1 oz (28 g) Nutrition Eziokwu 140 calorie Banye nri
Lay'sSweet Southern Heat Barbecue Potato Chips 15 ibe (28G) Nutrition Eziokwu 160 calorie Banye nri
Mpempe akwụkwọ nduku Zapp - ibe osisi Bar-B-Que 20 (28g) Eziokwu Nri 150 calorie Banye nri
N'otu aka ahụ, kedu ihe bụ ihe ndị dị na Lays barbecue chips?
Efrata: Poteto, Mmanụ Akwukwo nri (Sunflower, Ọka, na / ma ọ bụ Mmanụ Canola), Ihe Nleta BBQ (Sugar, Dextrose, Nnu, Malted Barley ntụ ọka, Torula Yist, Molasses, Maltodextrin [Mere Site Ọka], Egwuregwu Eke [Gụnyere Ọkụ Anwụrụ Anwụrụ Anwụrụ], Ngwa nri, Paprika, ọka Starch, Tomato Powder, Garlic ntụ ntụ, Yist wepụ, yabasị
Ọzọkwa, ole calorie dị na ibe BBQ esiri esi?
dietary eriri 2 g 8%
33 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Gini mere enwere obere nkpuru n’ime akpa?
Ndi BBQ Lays vegan?
Olee nnukwu bụ obere akpa nke ibe?
Ego ole bụ akpa nke ibe Lays?
Ego ole sodium dị na mmiri?
Ego ole bụ akpa ibe na 1990?
Gịnị ka a na-eme Cheetos?
Ikwu calorie ole ka m kwesịrị iri iji felata?
Calorie ole dị n’ime akpa Doritos niile?
Kedu ihe kpatara akpa nke ibe ji abata ọkara?
Ego ole ka dị na akpa nke ibe Lays?
Ndi Pringles siri ike karia ibe?
Olee calorie ole dị na akpa 200g nke ibe?
Olee calorie ole dị na obere akpa nke ibe?
Ego ole dị na akpa Tostitos?
Ugboro ole enwere na nnukwu akpa nke ibe?
Chips nduku dị njọ maka gị?
Kedu ihe kacha njọ maka gị?
Kedu nnukwu bụ akpa nke ibe nduku Lays?
Calorie ole dị n’ime akpa Doritos?
Ego ole dị na akpa Lays?
Kedu nnukwu nnukwu akpa ibe?
Ego ole ka m chọrọ maka mmadụ 50?
Kedu calorie ole bụ akpa Ruffles?
Iri calorie ole ka m kwesịrị iri iji felata?
Onwere obere mgbawa carb?
Olee calorie ole dị na akpa 180g nke Doritos?
Kedu calorie ole dị na Pringles?
Kedu ihe ndị dị na ibe nduku Lay?
Chere na nduku gị akpa mgbawa ọ̀ fụchiri ikuku? Ihe eji ehi ụra bụ n'ezie nitrogen gas. mgbawa ndị na-emepụta jupụta akpa iji gas na-eme ihe iji nyere aka dobe ibe ohuru. Ọ bụrụ na ọ na-ejupụta na mgbe nile ikuku, na ibe nwere ike gbanwee mmiri na iko.
mgbe nile Grịl-Haus Lay's dị vegan, mgbe Ghee BBQ Lay's abụghị. N'ụdị BBQ Lays nwere ọkụkọ na mmiri ara ehi ekpomeekpo, ebe mgbe niile (e ghere eghe) Grịl-Haus Lay's enweghị ngwaahịa anụmanụ. Ọ bụrụ na ị nwere ịhụnanya maka Lay's Ibe BBQ, Ikwesiri ịrapara na nke mbụ (eghe) dị ka a vegan.
mgbe nile A na-ere Lay na 10 ounce akpa; flavored Lay's na-ere na 9.5-ounce akpa; ma erere ha abụọ otu ego $ 4.29. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada dị ka ọtụtụ, mana ọ ga-eji ntakịrị mgbakọ na mwepụ. Ndị America na-azụta poteto Lay ruru ijeri $ 1.6 ibe kwa afọ.
Dịrị nke nduku ibe weta ihe karịrị ijeri $ 1 kwa afọ na ire ere ahịa, nke ruru ihe karịrị nde 200 akpa, ma ọ bụrụ na, nkezi price kwa akpa bụ ebe gburugburu $ 4.
Dị ka a ratụ ratụ-nri n'ji, m na-echeta ọnụahịa nke ihe 15 oz akpa nduku ibe na 1990 ka ọ bụrụ $ 2.99.
Ite Ikuku Cheetos Chiiz, Crunchy, 7.65 oz
CHEETOS Okwute Nri Crunchy Chiiz Flavored snacks.
50% na-erughị abụba karịa chiiz flavored snacks.
Cheetos Oven Bakred Crunchy cheese flavored snacks na-enye ezigbo uto na obere abụba karịa chiiz flavored snacks.
Agbanyeghị na ọ dị iche dabere na afọ na ogo ọrụ, ụmụ nwoke tozuru etozu chọrọ 2,000-3000 calories kwa ụbọchị iji nọgide na-ebu ibu ka ụmụ nwanyị toro eto mkpa ihe dị ka 1,600-2,400 dịka Ngalaba Ahụike US. Ahụ adịghị achọ ọtụtụ calorie iji lanarị.
DORITOS Nacho Chiiz na-esi ísì ụtọ Chips Chips
Ije ozi 1 oz (28g / ihe dịka 12)
Ọnụ ego kwa otu ọrụ
Potassium nke 50mg 0%
Ihe dị ka sodium 210 mg 9%
Protein dị 2 g
Gịnị mere Bụ Nduku Chip akpa Always Ọkara-Efu? Nke ahụ abụghị naanị ikuku ikuku ọ bụla na-afụ ụfụ mgbawa akpa, ma obu: O di nitrogen. Oxygen nwere ike ime ka poteto mebie na mmanụ na-aga ọkụ, na iru mmiri dị na ikuku ikuku na-eme ka ibe gaa soggy.
dietary eriri 1 g 4%
Eke Belata Abụba Original
Versiondị nke mbụ, nke nwere abụba na-enye calorie 150, gram 9 nke abụba (2.5 jupụtara), na milligram 150 nke sodium kwa 16-mgbawa na-eje ozi. Ha adighi nma karie - ma opekata mpe ha na-anwa ike ha nile ime ihe kachasi ihe ike ibe n ’ụwa ntakịrị dị egwu.
Kasị omenala nri ibe nye 150 na 200 calories kwa otu. Otu oru nduku oge niile ibe na-enye 160 calories, Gram 10 nke fat, gram 15 nke carbohydrate, na gram 2 nke protein.
Tostitos Crispy Agba Tortilla ibe, 3 Ounce (Mpempe nke 28)
Dị ka otu nnọkọ si dị akpa nke Lays ibe na Walmart, na akpa nwere 15 (otu ounce) ije ozi. Ugbu a 1 oz. na-eje ozi dị ihe dị ka 15 ibe.
Dị ka French fries, mkpụrụ osisi nduku nwere abụba, carbs a nụchara anụcha, na nnu. Ejikọtakwara ha na uru bara uru n'ọmụmụ ihe ọmụmụ. Otu nnyocha chọpụtara na ha bụ nri nwere ike ibute uru ibu (29). Esi mmiri ma ọ bụ ime achịcha poteto buru ibu mma.
Ruffles Cheddar na ude gbara ụka Ibe Nduku
Eghe eghe Cheddar na Ude Ude Ibe Nduku mee ndepụta adịghị mma, yana gram 10 nke abụba na 180 mg nke sodium kwa otu. Arapara n'ahụ n'ụdị mbipute (na ike ndepụta n'elu!) N'ihi na otu ekpomeekpo enweghị ikpe.
Dịrị nke Omuma Ibe Nduku,8 oz bag.
Nkezi obere akpa nke ibe nwere 180mg nke sodium.
Ike: calorie 497
Nduku anọ na ise na-abanye na nke ọ bụla akpa nke ibe Lay.
A na-ere Relay Lay na 10 ounce akpa; flavored Lay's na-ere na 9.5-ounce akpa; ma erere ha abụọ otu ego $ 4.29. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada dị ka ọtụtụ, mana ọ ga-eji ntakịrị mgbakọ na mwepụ. Ndị America na-azụta poteto Lay ruru ijeri $ 1.6 ibe kwa afọ.
Nkezi ụmụ nwanyị kwesịrị iri ihe dị ka puku abụọ calories kwa ụbọchị iji lekọta ya ibu ibu, na 1,500 calories kwa ụbọchị iji ida otu paụnd nke ibu ibu kwa izu. Ka ọ dịgodị, nkezi nwoke chọrọ 2,500 calories ilekọta, na 2,000 ka ida otu paụnd nke ibu ibu kwa izu. Agbanyeghị, nke a dabere n'ọtụtụ ihe.
Iji jiri eserese a buru ibu:
Ọnụ ego e kwuru maka 50 Ọrụ
Ije Ozi Nye Onye Ọ Bụla
Zụrụ Desserts chọpụta site pkg. nha 1/2 iko ma ọ bụ 3-4
Mkpụrụ, agwakọta 2 lbs Tablespoons 2 (1 ezigbo aka)
Chips, potzels, achịcha tortilla, chiiz curls wdg 3-4 lbs (lelee nha ngwugwu) 1-3 oz
Ọnụba abụba 10 g 15%
Abụba buru ibu 1 g 5%
Abụba nke na-eme ka ọkpụkpụ dị arọ 2.5 g
Ole calorie kwesịrị ị eri na nkezi? Obere nwanyi kwesiri eri banyere 2,000 calories kwa ụbọchị iji lekọta ya ibu ibu, na 1,500 calories kwa ụbọchị iji ida otu paụnd nke ibu ibu kwa izu. Ka ọ dịgodị, nkezi nwoke chọrọ 2,500 calories ilekọta, na 2,000 ka ida otu paụnd nke ibu ibu kwa izu.
Obere ala Nduku mgbawa Alternatives
Nduku ahụike ibe nwere ike ịdị ka ikuku ikuku, mana Atkins na-enye ọtụtụ ihe obere osisi uzo ndi ozo di iche iche. Ebe ahụ bụ 1.1g nke protein, 2.6g nke abụba, 0.7g nke eriri, 2.7g nke net carbs, na calorie 37 kwa na-eje ozi.
Eke Mbụ dị 150 calories n'ime ọrụ mgbawa 14, yana gram 9 nke abụba, gram 2.5 nke Abụba Jupụtara, miligram 160 nke sodium, gram 15 nke carbohydrates, na eriri gram 1, dị ka nri oriri eziokwu na weebụsaịtị ụlọ ọrụ.
ahụike dị ndụ, nri oriri, egosighị mmetụta na ịgba chaa chaa ọkachamara, egwuregwu
Ọ na -agụ kọfị ka mmiri?
Kedu otu esi agbakọ ikike nchekwa mmiri?